Tokony ho tamin’ny 07 ora maraina no nandalo teny amin’ny faritra misy ny art Malagasy ny lehilahy iray nitarika posy ary feno entana voarafitra. Rehefa nohadihadiana momba ireo entana ireo moa ity farany dia tsy nanan-kavaly ary niantso ny lehilahy 01 hafa nolazainy ho naniraka azy nitaona ireo entana ireo. Afaka fotoana fohy dia tonga teny an-toerana ny lehilahy iray, 27 taona, nilaza ho tompon’ny entana ary nitondra faitiora mahakasika ireo entana ireo. Rehefa nozahàna anefa ity faktiora ity dia hita fa sandoka ihany koa. Nogiazana avy hatrany ireo entana tratra ireo ary notànana avy hatrany koa ity lehilahy faha-02 ity ka nanaovana fanadihadiana. Niaiky moa ity farany tamin’ny fanadihadiana azy fa an’ny mpampiasa azy monina eny Ambohibao ireo entana ireo ary navoakany an-tsokosoko ny marainan’ny talata io. Niantso ilay vehivavy mpampiasa azy ihany koa izy ary nitantara ny zavatra nataony rehetra. Tonga nametraka fitoriana teo anivon’ny CSP6 Ambohimanarina ilay vehivavy mpampiasa azy manoloana izany zava-nitranga izany ary nolazainy fa mpiambina ny trano fitobian’entany eny Ambohibao ity nanao ny asa ratsy ity. Efa naverina tamin’ny tompony ireo entana nangalarina ireo ankehitriny, ary mbola mitohy ny fanadihadiana.